WAR CULUS: Madaxweyne Denni & Axmed Karaash oo ay ka dhex taagan tahay, Duulaanka Somaliland, Qabsashadii Yubbe Iyo Qaylada shacabka Sanaag oo….. – Puntlandtimes
GAROWE(P-TIMES)- Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Denni ayaa weli looga fadhiyaa inay jawaab cad oo aan afka ahayn ka bixiyaan duulaanka ciidanka Somaliland ay ku soo qaadeen deegaamo katirsan gobolka Sanaag.
Shacabka ku sugan deegaamada dhoolatusyada ciidanka ay kawado Somaliland iyo guud ahaan reer Sanaag ayaa ka dhur sugaya jawaabta ay bixinayso xukuumadda Puntland oo gudi u dirtay gobolada Sanaag iyo Haylaan ee Puntland.
Ururada bulshada rayidka ah, dhalinyarada, haweenka iyo waxgaradka gobolka Sanaag oo magaalada Badhan kulan kula qaatay wasiiro iyo xildhibaano ka socda Puntland ayaa sheegay inay taageersan yihiin xukuumadda Puntland haseyeeshee ay dowladda ka rabaan cudud ciidan oo lagu difaaco gobolka Sanaag.
Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa dhaq dhaqaaqa ciidanka Somaliland ee gobolka Sanaag ku tilmaamay duulaan qaawan iyo gardaraysi uu sheegay inaan geed loogu soo gaban wuxuuna sheegay inaysan cidna uga haybaysan doonin difaaca dhulka Puntland.
Taliyihii guud iyo abaan duulihii ciidamada Puntland ayaa madaxweynaha u gudbiyey warqadohooda iscasilaadda inkastoo aysan jirin ilaa hada cid arinkaasi warbaahinta si rasmi ah ugu faah faahisay.
Maalin kadib arinkaasi warbaahinta qaar ayaa baahisay in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Denni iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash ay isku khilaafeen talaabada dowladdu ka qaadayso dhaq dhaqaaqyada ciidanka Somaliland.
Xogihii ugu dambeeyey ee ay helayso Puntlandtimes.com ayaa sheegaya in madaxweynaha iyo ku-xigeenku ay arinkan wada tashiyo kala leeyihiin gudigii loo diray gobolka Sanaag oo Badhan ku sugan ayna dhowaan go’aan gaari doonaan walowse Axmed Karaash uu kusii adkaysanayo xaalad dagaal oo ka dhan ah Somaliland.
Madaxweyne Denni ayaa isna go’aankiisu cadayn, waxaana jira kulamo kala duwan oo uu la qaadanayo la taliyaashiisa si uu jawaab uga soo saaro xaalada gobolka Sanaag.
war heedhe kaagaanu maxaa ummadda arimaheeda hoose ku daba dhigay ma camal kale ayaad waydey mase ogtahay imisa meelood baa adduunka la iska khilaafsan yahay mxaa tan hoose ee mandaqadaan ku daba dhigay ilaa aad tiraahdid xataa laba qof oo fikir ninba si u arko inaad khilaaf ku sheegtid mise adigu qola kale ayaaad u shaqaysaa ? yaabay keligay !!!
war hooy ka joog maahee ka joog waxaad wado kajoog !!
Faroole futoole, o aaminsan inuu Isaaq yahay ayaa Denni ku cadaadinaya inaan Suuliland dagaal lagu qaadin.. Denni waxaa xataa lagu khasbay inuu La taliyaha difaaca u magacaabo Maxamed Faroole Futoole
Faroole Futoole ba meesha ku dhex jira o isagu isu haysta inuu Isaaq yahay
Goormuu Khabiir Amni Noqdey. Waxaa Soo if Baxaya Daciifnimada Dani. Puntland Waxaa Ay Leedahay Cadaw Fara Badan ,Sidaa Darteed Waxaa Ay u Baahantahay Nin Adag O0 Go,aan Adag , 00 Waxa uu Rabo Aan ka Laba Labeyn.
Ma waxa rabtiin in Deni shan sano ku lumiyo colaada Somaliland aan macno lahayn ama ma waxa rabtiin in wax ka qabto dhibaatooyinka Puntland ka jidha? Labada ma la helahayo mid ha la doorto.
Xadka AaranJaan dhinaca Galbeed magaalada Baran waaye.